Wararka - Noofambar 13-15,2019/ COSMOPROF ASIA HONG KONG /Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd.
Fashion ciddiyaha midabka
Sannadkan waa markii saddexaad ee Faceshowes uu ka qaybgalo COSMOPROF ASIA HONG KONG. Marka dareenkayaga bandhiggani uu sare u sii kacayo, waxa aanu korodhsanay wax ka badan. Markaa sanadkan si badheedh ah ayaanu u labanlaabnay aagga carrigayaga. Dabcan, rugteena ayaa wali ku jirta booskii hore, lambarka Booth waa 5E-B4E. Waxaan si taxadar leh u diyaarinay iyada oo leh heerar farsamo oo heer sare ah, iyo alaabooyin badan oo cusub ayaa mar kale noqday mid muhiim u ah warshadaha. Soo jiidatay ganacsato badan oo Shiinees ah iyo ajaanib ah si ay u joojiyaan si ay u daawadaan oo ay u wada xaajoodaan. Wada-hawlgalayaal badan iyo in ka badan ayaa na bartay, fahma xoogga warshadeena, oo ay bilaabaan oo qoto dheereeyaan iskaashigii hore ee midba midka kale. Tani waa iid warshadaha iyo safarka goosashada.
COSMOPROF ASIA HONG KONG waxay had iyo jeer ahayd mid ka mid ah bandhigyada ugu saameynta badan adduunka, waxayna ku jirtaa booska ugu horreeya ee suuqa bilicda ee gobolka Aasiya-Baasifigga. Goobtu waa Hong Kong, Shiinaha, Cosmoprof Asia oo lagu qabtay Xarunta Shirarka iyo Bandhigga waxay soo ururisay 2,021 bandhigayaal oo ka kala yimid 46 waddan iyo gobollada, waxayna dejiyeen shan goobood oo bandhigyo waaweyn ah oo ay ku jiraan qurxinta iyo daryeelka shakhsi ahaaneed, quruxda xirfadeed, dabiiciga ah iyo organic, farshaxanka ciddiyaha, iyo timo-jarista iyo qalabyada. 2019 COSMOPROF ASIA waxay soo jiidatay in ka badan 40,000 iibsadayaal ah oo ka kala yimid 129 wadan iyo gobolo si ay u soo booqdaan oo ay u iibsadaan. David Bondi, oo ah Agaasimaha Asia Pacific Beauty Expo Co., Ltd. ayaa yiri, "In kasta oo caqabadaha hortaagan Hong Kong, Asia Pacific Beauty Expo weli waa meel ku habboon xirfadlayaasha warshadaha quruxda adduunka si ay ula kulmaan oo ay ula xiriiraan. Bandhigayaasha iyo booqdayaasha tayada sare leh ayaa si dhab ah uga xaajooda ganacsiga inta lagu jiro bandhigga. Dhammaantood waxay si fiican u eegeen bandhigga."
Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2007 oo ku yaala Yiwu, Shiinaha, Warshada degan 10,000 mitir oo laba jibbaaran, shaqeeya ku dhawaad ​​200 dadka, R & D iyo kooxda design ee 10 people.Our waxay leeyihiin qalab wax soo saarka sare, tayo fiican leh. nidaamka iyo nidaamka saadka hufan. Waxaan bixinaa adeegyada OEM/ODM. Waxaan la aas aasnay ​​iskaashi muddo dheer oo xasilloon oo lala yeesho Shiinaha dukaamada ciddiyaha iyo shirkadaha ganacsiga ee ugu waaweyn. Waxaan u dhoofinay in ka badan 100 countreis sida Europe, America, South America, Russia, Yukreeniyaan Japan iyo South Korea, iwm. Iyada oo leh tayo la isku halayn karo, qiimo tartan iyo adeegyo xirfad leh, waxaan ku raaxaysanay sumcad sare oo ka timid cleints adduunka oo dhan. Ka gudubtay CE, ROHS, BV, MSDS, SGS.
Waqtiga boostada: Nov-11-2020